Laptop Service Guide E-Book...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်းနှင့် သိသင့်စရာများ စာအုပ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ကွန်ပျူတာ လေ့လာနေသော သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ရှိထားသင့်တယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! စာရေးဆရာ သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ...! Computer အကြောင်း စုံအောင်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါ....! Download လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျွန်တော် အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့်လည်း တင်ပေးထားပါတယ်....!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 13 MB )
No Response to "Laptop Service Guide E-Book...!"